Kooriyaan Kaabaa, Maayik Peens nama raata'aadha ittiin jette - BBC News Afaan Oromoo
Kooriyaan Kaabaa, Maayik Peens nama raata'aadha ittiin jette
Maayik Peens - nama siyaasaa carra dhabeessa ittiin jette Kooriyaan Kaabaa
Qondaalli mootummaa buleessi Kooriyaa Kaabaa Choe Son-hui Pirezidaantii Itti Aanaan Ameerkaa Maayik Peens raata'aadha ittiin jedhanii arrabsan.
Hariiroon dippiloomaasii isaanii yoo akkaataa yaadameen milkaa'uu baate akkuma duraa Niwukilara agarsiisuu itti fufuuf carraan jiraachuu ibsaniiru.
Obbo Choe Son-hui akka jedhanitti Pyongyang mariif jecha Ameerkaa waan kadhattuuf hin qabdu, haasaa akka waliin taasisaniifis Ameerkaa sossobuu hin dhaqnu jedhan.
Tibbana gareen lameenuu walga'ii gaafa Waxabajjii 12 Tiraampii fi Kiim irratti waliin dubbachuuf eegamaa ture akka harkifachuu danda'u ykn ammoo akka haqamufaa dubbachaa turan.
Ameerkaan dhimma Niwukilara Kooriyaa Kaabaa dhaabsisuu cichitee itti fufti taanaan karoora walga'icha deemuu irra deebi'anii akka ilaalan Piyongyaang beeksisteetti.
Walga'icharratti hirmaachuuf kan haaldureewwan guutuun barbaachisu Kooriyaa Kaabaati jetti Ameerkaan , ibsa Kibxata darbe baasteen.
Peens 'fakkeessaa siyaasaa' dha
Dhimmoota hariiroo dippiloomaasii Ameerkaa fi Kooriyaa Kaabaa keessatti adda durummaan hirmaachaa kan turan Choe Son-hui haasaa Pirezidaantii Itti Aanaa Ameerkaa Maayik Peens kan dhaaba hin qabnee fi ejjenno-dhabeessa jechuun komatan.
Dhimma murtee Liibiyaa irratti fudhatan Kooriyaa Kaabaarratti hojiirra oolchuu ilaalchisuun yaada pirezidaantichi kennanis qeeqaniiru.
Madda suuraa, North Korea expert Jean Lee describes the best pos
Kim Jong-un fi waahillan isaanii
Kooriyaa Kaabaa niwukilaraan of dandeesee jirtu Liibiyaa waliin waldorgomsiisuu isaaniitiin namni kun ''nama siyaasaa fakkeessaa fi ejjennoo hin qabneedha'' ittiin jedhaniiru.
''Yaada jufunfulaa fi doofaa akkasii nama Pirezidantii Itti Aanaa ta'e irraa dhagahuun baayyee qaaniidha'' jedhan.
Amalli Ameerkaa akka namni kadhatu barbaadu kan jettu Aadde Choe, Kooriyaan Kaabaammoo kadhaa fi sososbuuf qophii miti jedhan.
Madda suuraa, CBS
Kooriyaan Kaabaa nama kana maaliif jibbu?
Gorsaan Dhimma Nageenyaa Ameerkaa John Boltonis gamasaaniitiin torbee darbe mala ittiin Liibyaa Niwukilara irraa walaboomsan Kooriyaa Kaabaarratti hojiirra oolchina jechuun isaanii Kooriyaa Kaabaa hedduu aarseera.
KALLATTIIN Kanneen ajjeechaa Hacaaluuf haqa gaafatan akka gargaartu Ilhaan Omaar himte
Ajjeechaa Hacaaluu irratti raawwateef haqni akka argamu Ameerikaan akka gargaartu waanin danda’e hunda nan godha jechuun miseensi kongirasii Ameerikaa Ilhaan Omaar himte. Dabalataan biyyoonni biroo keessoo Itoophiyaa keessa seenuun jeequmsa akkasumas qoodinsa gara caalu akka hin finne akka eeggatan dhaamteetti.
Ministirri Muummee Itoophiyaa Abiy Ahimad guyyaa kaleessaa ajajoota Raayyaa Ittisa Biyyaafi Poolisii federaalaa akkasumas Abbaa Alangee waliin marii taasisaniin guyyoota darban diraamaan siyaasaa guutuu biyyattii keessatti rakkoo uumuuf yaaliin taasifameera jechuun dubbatan.
Daqiiqaa 32 dura
UN Itoophiyaatti hunduu haleellaa sabummaa raawwachuurraa akka of qusatu gaafate
Haati warraafi abbaan warraa adii dubartii gurraattii shugguxiin doorsisan himataman
"Mana hidhaa keessatti nu guddifatanii, seeratti nu dhiyeeffatan"
Yeroo dhuma kan haaromfame: 7 Fuulbaana 2018
'Jawaar, Baqqalaa fi kaan aanga'oota mootummaa ajjeesuuf turan'